Cash Accounting & Accrual Accounting — Balance Professional Services
လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စာရင်းဇယားစွဲပုံ အခြေခံနည်းလမ်း (၂) မျိုး
လုပ်ငန်းရှင်တွေချမှတ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ ၎င်းတို့သုံးတဲ့ Accounting Method (စာရင်းဇယားစွဲပုံ အခြေခံနည်းလမ်း) အပေါ်အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ စာရင်းဇယားစွဲပုံနည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ၊ သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ ဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးတက်လာတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဘက်ဂျက်အတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့ ငွေကြေးသုံးသပ်ချက်တွေ လိုအပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ Accounting Method ကို အသုံးပြုပြီး ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကို ခြေရာခံနိုင်ဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့ ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် လုပ်ငန်းရဲ့ အနာဂတ်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို သေသေချာချာထိုးထွင်းသိမြင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် ဘယ် Accounting Method ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ? ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ Accounting Method ကို ပြောင်းလဲပြီးသုံးသင့်သလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
• Cash Accounting နဲ့
ဆိုပြီးအခြေခံအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာမှ လုပ်ငန်းသေး တော်တော်များများကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ Cash Accounting ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
Cash Accounting ဆိုတာဘာလဲ?
Cash Accounting ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ ဝင်ငွေကို ငွေသားလက်ခံရရှိမှသာ ဝင်ငွေ ဟုမှတ်တမ်းတင်ပြီး၊ ထွက်ငွေကိုလည်းပေးချေပြီးမှသာ ထွက်ငွေလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ ပေးရန်ရှိ၊ ရရန်ရှိများကို မရမချင်း အကြွေးစာရင်းထဲမှာပဲထားပြီး ငွေစာရင်းစာအုပ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းကို အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းသေးသမားတွေနဲ့ အခုမှစတင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရေးမှတ်ရတာ လွယ်ကူရှင်းလင်းလို့ပါပဲ။
Cash Accounting ရဲ့အားသာချက်ကတော့ ဘယ်အချိန်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ ငွေအမှန်တကယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်းခြေရာခံနိုင်၊ သိနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းထဲက ငွေလက်ကျန်နဲ့ အံဆွဲထဲက ငွေလက်ကျန်ဟာ အမြဲကိုက်ညီနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Cash Accounting ရဲ့အားနည်းချက်က လချုပ်၊ နှစ်ချုပ် တွေမှာမပေါ်တဲ့ ပေးရန်ကျန်အကြွေးတွေက စာရွက်ပေါ်က အမြတ်ထက် ပိုနေတတ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ Cash Accounting သုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်တော့မယ်ဆို အရှုံးအမြတ်စာရင်းမှာ မပါတဲ့ပေးစရာရှိတဲ့အကြွေးတွေကို သေချာထောက်လှမ်းသင့်ပါတယ်။
Accrual Accounting ဆိုတာဘာလဲ?
နောက်တစ်နည်းဖြစ်တဲ့ Accrual Accounting မှာတော့ ဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေကို နဲ့ တကယ့်ငွေသား လက်ခံမရရှိသေး၊ မပေးရသေးလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။
ဥပမာ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းက ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖောက်သည်က ငွေကို အမှန်တကယ်မပေးချေရသေးလည်း ဝင်ငွေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာမျိုးပါ။ လုပ်ငန်းရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေမှာလည်း အတူတူပါဘဲ လုပ်ငန်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကို ကြိုတင်လက်ခံအသုံးပြုထားပေပြီး ငွေမပေးချေရသေးလည်း အသုံးစရိတ်လို့ရေးမှတ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။
Accrual Accounting ကိုလုပ်ငန်းကြီးတွေမှာပိုအသုံးများပါတယ်။ သူရဲ့အားသာချက်ကတော့ ပစ္စုပ္ပန်တင်ကနေ အနာဂတ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေရဲ့အခြေအနေကို ကြိုသိမြင်နိုင်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှန်တကယ် မြတ်နိုင်ချေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်တာပါပဲ။ ရေရှည်စီမံကိန်း ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက် Accrual Accounting ကများစွားအကျိုးပြုပါတယ်။
Accrual Accounting ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ Cash Flow (လုပ်ငန်းအတွင်း အမှန်တကယ်လည်ပတ်ငွေ) တွေကို တိတိကျကျမသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Cash Flow မသိတော့ လက်ထဲအမှန်တကယ်ငွေသားမရှိပဲ သုံးမိစွဲမိတာတွေဖြစ်ပြီး ရေတိုငွေသားပြတ်လပ်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ လုပ်ငန်းမှာ စာရင်းထဲမှာတော့ငွေတွေဝင်ပြီး မြတ်နေပြီး အပြင်မှာတော့ လက်ထဲငွေသားမရှိတာတွေ ဖြစ်တတ်ကြုံရတတ်ပါတယ် (ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Accrual Accounting နည်းက ရရန်ရှိ၊ ပေးရန်ရှိသော ငွေများကိုပါ မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်)။ Accrual Accounting သုံးရာမှာ လည်ပတ်ငွေ/ Cash Flow ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။
Cash နဲ့ Accrual Accounting နဲ့ မတူညီတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အောက်မှာ ဥပမာလေးနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ သင်ကအောက်ပါ ငွေပေးငွေယူမှုတွေကို တစ်လအတွင်းလုပ်တယ်ဆိုပါစို့။
• ဒီလမှာ ကိုယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုအတွက် ၅၀၀,၀၀၀ (ငါးသိန်း) ကျပ်တန် ငွေတောင်းခံလွှာကို ဝယ်သူထံ ပို့လိုက်တယ်။ (ငွေတောင်းထားဆဲ အမှန်တကယ် မရသေး)
• အဲ့ဒီလမှာပဲ ကိုယ်ယူထားတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေအတွက် အကြွေးပေးဖို့ ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) ကျပ်တန် ငွေတောင်းခံလွှာကို ကုန်ကြမ်းသွင်းသူက သင့်ဆီတောင်းလိုက်တယ်။ (သင့်ကိုလာတောင်းတယ် အမှန်တကယ်မပေးလိုက်ရသေး)
• အဲ့အချိန်မှာ "အရင်လ"က အကြွေးဝယ်သွားတဲ့ ဖောက်သည်က ပေးစရာရှိတဲ့ အကြွေး ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) ကျပ် လာပေးပြီး ကိုယ်ကလည်း အရင်လက ကုန်ကြမ်းဖိုးငွေ ၇၅၀,၀၀ (ခုနှစ်သောင်းခွဲ) ကျပ် ပေးချေလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။
Cash Method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်
ဒီလအတွက် အမြတ်က ၂၅,၀၀၀ (နှစ်သောင်းခွဲ) ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဝင်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ထဲကနေအမှန်တကယ်ပေးချေလိုက်ရတဲ့ ၇၅,၀၀၀ ကိုနုတ်ထားတာပါ။
Accrual Method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီလအတွက် အမြတ်က ၄၀၀,၀၀၀ (လေးသိန်း) ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရရန်ရှိဝင်ငွေ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်ထဲကနေ ပေးရန်ရှိငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ကိုနုတ်ထားတာပါ။ ကျန်တဲ့ ၁၀၀,၀၀၀ နဲ့ ၇၅,၀၀၀ က အရင်လစာရင်းထဲပါသွားပြီးသားမို့ပါ။
ဒါကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေသိသင့် Cash Accounting နဲ့ Accrual Accounting ရဲ့ကွာခြားချက်ပါ။ အချုပ်ပြောရရင် အနာဂတ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်စရာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက Accrual Accounting ကိုသုံးပြီး အမြတ်ကိုကြိုတင်ချိန်ဆကြတယ်၊ လုပ်ငန်းသေးသမားများကတော့ Cash Accounting ကိုသုံးပြီး Cash Flow ကောင်းဖို့ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။